Waa maxay Afarta sharciyo ruux?
Afarta Sharciyo Ruux waa waddada lagu wadaagayo aqbaarta wanaagsan ee badbaadada ee laga heli karo rumeysiga Ciise Masiixiga. Waa waddo fudud ee diyaarinta warbixinta ugu wanaagsan ee Injiilka ee afar qodob.
Mida ugu horeysa Afarta Sharciyo ee Ruux, “Ilaahey wuu ku jecelyahay iyo wuxuu u hayaa qorsho cajiib ah noloshaada." Yooxanaa 3:16 wuxuu noo sheegay, “Ilaahey aduunka sidaas u jecel in uu siiyay Halkiisa iyo Wiilkiisa kaliya, ee qof walba ee aaminsan Isaga mala haligayo laakin in uu helo nolol daa’in." Yooxanaa 10:10 wuxuu noo sheegay sababta Ciise u yimid, “waxaan u umid in laga yaabo in ay nolol helaan, iyo helaan iyada oo buuxdo." Maxaa naga xanibayo jaceylka Ilaahey? Maxaa naga ilaalinayo helida nolal badan?
Mida labaad ee Afarta Sharciyo ee Ruuxa waa, “Aadanaha waxay ku dambiyeysanyihiin dambiyo iyo sidaas darteed waa ka gooniyeysanyihiin Ilaahey. Sida natiijada ah, ma ogaan karno qorshaha wanaagsan ee Ilaahey ee nolosheena." Rooma 3:23 wuxuu xaqiijinayaa warbixintaan, “oo dhammaan kuwa dambiyada leh ama ka gaabiyay ammaanta Ilaahey." Rooma 6:23 wuxuu na siiyaa cawaaqiibta dambiga, “mushaarka dhimashada dambiga." Ilaahey wuxuu noo abuuray in aan wehelsano isaga. Sikastaba, aadanaha wuxuu keenay aduunka dambiyo, iyo sidaas darteed waa laga gooniyeeyay Ilaahey. Waan ku ciyaarnay xiriirkiisa uu Ilaahey noogu talagalay in aan helno. Waa maxay xalka?
Mida sedexaad ee Afarta Sharciyo ee Ruuxa waa, “Ciisa Masiixi in uu yahay Ilaaheyga kaliya ee dambiyadeena. Iyadoo loo marayo Ciise Masiixi, waa nalaga cafin karaa dambiyadeena iyo lagu celin karaa xiriir saxan Ilaahey." Rooma 5:8 wuxuu noo sheegay, “Laakin Ilaahey wuxuu noo muujiyay Jaceylkiisa gaarka ah inaga: Inagoo weli dambiilayaal ah, Masiixi inaga ayuu noo dhintay." 1 Korintos 15:3-4 wuxuu noo sheegay waxa aan u baahannahay in aan ogaano iyo aaminno si markaas aan u badbaadno, "...in Ciise Masiixi u dhintay dambiyadeena sida waafaqsan Kitaabada, oo ah in la duugay, ee uu soo noolaaday maalinta sedexaad sida waafaqsan Kitaabada..." Ciise Naftiisa wuxuu sheegay in uu Isaga yahay waddada kaliya ee lagu badbaado Yooxanaa 14:6, “Waxaan ahay waddada iyo runta iyo nolasha. Ma jiro qof u imaanaya Aabaha aan ka aheyn in uu aniga isoo maro." Sidee ayaan u heli karaa naxariistaan cajiibka ah ee badbaadada?
Afarta Sharciyo Ruuxa ee afaraad waa, “Waa in aan u saarnaa rumeynteena Ciise Masiixi sida Badbaadiye si markaas loo helo naxariista badbaadada iyo u ogaatid qorshaha cajiibka ah ee Ilaahey ee nololaheena." Yooxanaa 1:12 wuu noo sharaxay middaan inaga, “Weli dhammaan kuwa soo dhaweeyay Isaga, kuwa aaminay Magaciisa, wuxuu siiyay xaqa lagu noqonayo carruurta Ilaahey." Falimaha Rasuulada 16:31 wuxuu yiri aad ayay u cadahay, “Aamin Ciisaha Ilaaheyga, iyo waad badbaadeysaa!" Waxaan ku badbaadi karnaa naxariista kaliya, oo dhinaca rumeynta kaligeed, ee Ciise Masiixi kaliya (Efesos 2:8-9).
Haddii aad rabtid in aad aamintid Ciise Masiixiga sida Badbaadiyahaaga, ku dheh erayada xigga Ilaahey. Dhihida erayadaan maku badbaadineyso, laakin aaminaada Ciise Masiixiga waxay! Docodaan waxay si fudud uga fogtahay waddada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo u mahadceli Isaga oo badbaadintaada ah. “Ilaagey, waan ogahay in aan dambi kaa galay iyo istaahilo ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda adiga ayaan kugu meeleeyay ee badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"